ကမ်ဘာ့ ဆံပငျအရှညျဆုံး အမြိုးသမီးတှနေတေဲ့ ရှာလေး…. – Barnyar Barnyar
ကမ်ဘာ့ ဆံပငျအရှညျဆုံး အမြိုးသမီးတှနေတေဲ့ ရှာလေး….
အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ဆံပငျဆိုတာ အရေးကွီးတဲ့ အရာပါ။ အမြိုးသမီး အမြားစုအနနေဲ့ ဆံပငျရှညျ ထားရခွငျးကို နှဈသကျမွတျနိုးလေ့ ရှိကွပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဆံပငျအရှညျဆုံး အမြိုးသမီးတှေ နထေိုငျတဲ့ ရှာကတော့ တရုတျနိုငျငံ မှာရှိတဲ့ Huangluo Yao ဆိုတဲ့ ကြေးရှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီရှာမှာ နထေိုငျတဲ့ လူမြိုးစု တှကေတော့ ဆံပငျရှညျ ထားခွငျးဟာ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစတေယျလို့ ယုံကွညျ ထားကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အဲဒီရှာမှာ နထေိုငျတဲ့ မိသားစု ၆၀ လောကျက ဆံပငျအရှညျ ထားလေ့ ရှိကွပါတယျ။
အဲဒီ ကြေးရှာမှာ နထေိုငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဆံပငျအရှညျက ၃ ပေ ကနေ ၆ ပေ အထိ ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး “ ကမ်ဘာ့ ဆံပငျအရှညျဆုံး ကြေးရှာ” အဖွဈ ဂငျးနဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကြေးရှာကို ရောကျဖို့ တရုတျနိုငျငံ တောငျပိုငျးက မွို့တမွို့ဖွဈတဲ့ Guilin မွို့ကနေ ၂ နာရီလောကျ ကားစီးသှားရပါတယျ။
Jinsha မွဈကမျးဘေးမှာရှိတဲ့ Huangluo Yao ကြေးရှာရဲ့ ထူးခွားတဲ့ ဓလကွေ့ောငျ့ ၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ နိုငျငံတကာ ခရီးသှား တှေ လာရောကျ လညျပတျနိုငျဖို့ တရုတျ အစိုးရက စီစဉျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကြေးရှာမှာ နထေိုငျတဲ့ လူမြိုးစုတှဟော Qin မငျးဆကျ လကျထကျ ကတညျးက နထေိုငျလာခဲ့ကွတဲ့ ဒသေခံ ဌာနေ တိုငျးရငျးသားတှလေို့ သိရပါတယျ။
လူဦးရေ ၆၀၀ နီးပါးရှိပွီး မိသားစုဝငျ ၈၀ နီးပါး ရှိပါတယျ။ အဲဒီကြေးရှာက အမြိုးသမီးတှဟော သနျ စှမျးနကျမှောငျပွီး ရှညျလြားတဲ့ ဆံပငျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကွပွီး အမြိုးသမီးတယောကျရဲ့ ဆံပငျ အလေးခြိနျက ၂ ပေါငျကြျော ရှိပါတယျ။ Yao အမြိုးသမီးတှဟော ဆံပငျအရှညျ ထားရတာကို ဂုဏျယူလေ့ ရှိပွီး ဒီဓလေ့ ပြောကျကှယျ မသှားအောငျ မြိုးဆကျ တခုကနေ နောကျမြိုးဆကျ တခုကို လကျဆငျ့ ကမျး သယျဆောငျ ခဲ့ကွပါတယျ။
မွဈကမျးဘေးမှာ တညျရှိတဲ့ အတှကျကွောငျ့လညျး မွဈရနေဲ့ နေ့ စဉျ ခေါငျးလြှျောလေ့ ရှိကွပွီး ရကျသတ်တပတျ ၁ ပတျရဲ့ ၃ ရကျမွောကျနေ့၊ ဒါမှမဟုတျ ၄ ရကျမွောကျနေ့ မှာတော့ ဆံပငျရှညျဖို့ အထူး ဖျောစပျထားတဲ့ ဆေးတမြိုးနဲ့ ခေါငျးလြှျောလေ့ ရှိကွတယျလို့ သိရပါတယျ။
နောကျထပျ ထူးခွားခကျြ တခုကတော့ အိမျထောငျမကသြေးတဲ့ မိနျးမပြို တှအေနနေဲ့ သူမရဲ့ဆံပငျကို အခွားသူတှေ မမွငျရအောငျ ထိနျးသိမျး ရတာပါပဲ။ မိနျးမပြိုတယောကျရဲ့ ဆံပငျကို ပထမဆုံး မွငျရတဲ့ အမြိုးသားဟာ သူမရဲ့ ခငျပှနျးလောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အဲဒီကြေးရှာက မိနျးမပြိုတှဟော သူမရဲ့ ဆံပငျကို အခွားသူတှေ မမွငျရအောငျ အပွာရောငျပုဝါနဲ့ ဖုံးထားလေ့ ရှိကွပါတယျ။
Yao အမြိုးသမီးတှေ အတှကျတော့ ဆံပငျအရှညျက အရေးကွီးတဲ့ အမှတျအသား တခုပါပဲ။ Yao အမြိုးသမီးတှဟော မှေးပွီးလို့ ရကျ ၁၀၀ ပွညျ့တဲ့အခြိနျနဲ့ အသကျ ၁၈ နှဈပွညျ့တဲ့အခြိနျ ၂ ကွိမျပဲ ဆံပငျညှပျလေ့ ရှိကွပါတယျ။
ဓလတေ့ခု တညျမွဲအောငျ ရရှေညျ ထိနျးသိမျး ထားနိုငျတဲ့အတှကျလညျး Huangluo Yao ကြေးရှာဟာ “ ကမ်ဘာ့ ဆံပငျအရှညျဆုံး ကြေးရှာ ” အဖွဈ ကမ်ဘာမှာ လူသိမြားတဲ့ ကြေးရှာတရှာ ဖွဈလို့နပေါတယျ။
Crd ; irrawaddy
ကမ္ဘာ့ ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေနေတဲ့ ရွာလေး
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဆံပင်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ။ အမျိုးသမီး အများစုအနေနဲ့ ဆံပင်ရှည် ထားရခြင်းကို နှစ်သက်မြတ်နိုးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေ နေထိုင်တဲ့ ရွာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ Huangluo Yao ဆိုတဲ့ ကျေးရွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ လူမျိုးစု တွေကတော့ ဆံပင်ရှည် ထားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ ယုံကြည် ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ မိသားစု ၆၀ လောက်က ဆံပင်အရှည် ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီ ကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆံပင်အရှည်က ၃ ပေ ကနေ ၆ ပေ အထိ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း “ ကမ္ဘာ့ ဆံပင်အရှည်ဆုံး ကျေးရွာ” အဖြစ် ဂင်းနစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျေးရွာကို ရောက်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက မြို့တမြို့ဖြစ်တဲ့ Guilin မြို့ကနေ ၂ နာရီလောက် ကားစီးသွားရပါတယ်။
Jinsha မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ Huangluo Yao ကျေးရွာရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဓလေ့ကြောင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွား တွေ လာရောက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ တရုတ် အစိုးရက စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ လူမျိုးစုတွေဟာ Qin မင်းဆက် လက်ထက် ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ဒေသခံ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားတွေလို့ သိရပါတယ်။
လူဦးရေ ၆၀၀ နီးပါးရှိပြီး မိသားစုဝင် ၈၀ နီးပါး ရှိပါတယ်။ အဲဒီကျေးရွာက အမျိုးသမီးတွေဟာ သန် စွမ်းနက်မှောင်ပြီး ရှည်လျားတဲ့ ဆံပင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ဆံပင် အလေးချိန်က ၂ ပေါင်ကျော် ရှိပါတယ်။ Yao အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆံပင်အရှည် ထားရတာကို ဂုဏ်ယူလေ့ ရှိပြီး ဒီဓလေ့ ပျောက်ကွယ် မသွားအောင် မျိုးဆက် တခုကနေ နောက်မျိုးဆက် တခုကို လက်ဆင့် ကမ်း သယ်ဆောင် ခဲ့ကြပါတယ်။
မြစ်ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း မြစ်ရေနဲ့ နေ့ စဉ် ခေါင်းလျှော်လေ့ ရှိကြပြီး ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ်ရဲ့ ၃ ရက်မြောက်နေ့၊ ဒါမှမဟုတ် ၄ ရက်မြောက်နေ့ မှာတော့ ဆံပင်ရှည်ဖို့ အထူး ဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆေးတမျိုးနဲ့ ခေါင်းလျှော်လေ့ ရှိကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားချက် တခုကတော့ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ မိန်းမပျို တွေအနေနဲ့ သူမရဲ့ဆံပင်ကို အခြားသူတွေ မမြင်ရအောင် ထိန်းသိမ်း ရတာပါပဲ။ မိန်းမပျိုတယောက်ရဲ့ ဆံပင်ကို ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ အမျိုးသားဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီကျေးရွာက မိန်းမပျိုတွေဟာ သူမရဲ့ ဆံပင်ကို အခြားသူတွေ မမြင်ရအောင် အပြာရောင်ပုဝါနဲ့ ဖုံးထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။
Yao အမျိုးသမီးတွေ အတွက်တော့ ဆံပင်အရှည်က အရေးကြီးတဲ့ အမှတ်အသား တခုပါပဲ။ Yao အမျိုးသမီးတွေဟာ မွေးပြီးလို့ ရက် ၁၀၀ ပြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန် ၂ ကြိမ်ပဲ ဆံပင်ညှပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဓလေ့တခု တည်မြဲအောင် ရေရှည် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်တဲ့အတွက်လည်း Huangluo Yao ကျေးရွာဟာ “ ကမ္ဘာ့ ဆံပင်အရှည်ဆုံး ကျေးရွာ ” အဖြစ် ကမ္ဘာမှာ လူသိများတဲ့ ကျေးရွာတရွာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ရုပျခြော လှနျးတာကွောငျ့ ယောကျြားလေးဖွဈကွောငျး ID ကတျထုတျပွရတဲ့ကောငျလေး
မိမိအိမျမှာ အိမျမွှောငျစုတျထိုးသံ ကွားရရငျ ဘာဖွဈနိုငျသလဲ…